by URebcca Murray noFred Topel
"Ayikho indlela endingayi kubandakanyeka nayo. Kwafuneka ndisebenze kuyo"
Ngo-2002 i- Walk Walk to Remember isenokuba ngaphezu kweminyaka elishumi ubudala, kodwa ifilimu ithathwa njengomdlalo weklasi womdlalo osemncinci nakubantu abancinci abancinci ukuba bangayiboni kwimiboniso. Ngokusekelwe kwincwadana ka-1999 nguNobhala weNcwadana uNicolas Sparks, umculi we-movie u-Mandy Moore njengoJamie Sullivan, intsha engumntu ongenalwazi kunye nogqoba obonakalayo. ncinane kakhulu kwiminyaka yabo ekhula ndawonye njengoko i-Landon ifunda ukuba kuninzi kuJamie kunokuba wayecinga okanye alindele.
About.com uxoxwa noMorey, owathi ngexesha lokukhululwa kwe- A Walk ukuya kwiNkumbulo naye wasebenza kwi-albhamu yakhe, uMqulu .
Ngaba wayesebenza kwiifilimu ukuguquka kwendalo okwenzayo?
Kwaye-kwakungekho into endiyifunayo. Andizange ndikhange indima ekhokelayo. Ndinegalelo elixhasayo kwiChristmas Diaries kwaye ndicinga ukuba ndiza kuqhubeka ndiqhubela phambili kunye nokwakha ithemba lam. Kodwa ndandithanda kakhulu le ncwadi, ukuba xa ndifunda isicatshulwa, kwakungekho ndlela endikwazi ukuzibandakanya nayo. Kwafuneka ndisebenze kuyo.
Ingaba unobumbano kulo mlingisi?
Kukho ukufana phakathi kwethu, kodwa kukho ukungafani kakhulu. Kukho into endiyifunayo ukuba ndifunde kuJamie-kwaye ngokudlala uJamie-kwaye ndicinga ukuba oko kwakuyinzathu yam enkulu yokufuna ukwenza i-movie.
Ukuzithemba ukuba unayo kunye nelokuba akavumeli nto ifike kuye.
Inyaniso yokuba uhlaselwe esikolweni kwaye akavumeli izimvo zabantu kunye neempembelelo zakhe kuye aze aziguqule ngokwakhe. Yilo hlobo lokuzithemba ukuba andiyifumananga ebomini bam ngo-17. Ndicinga ukuba abaninzi abaneminyaka engama-17 abanalo kwaye yinto endifuna ukuyifunda ngokudlala uJamie.
Xa uqala ukuphuma kwakho waxelwa ...
Ngokuqinisekileyo. Into "ye-blonde pop".
Ingaba yiloo nto uzama ukuyifunda kule movie? Akufanele uphelelwe ngumsindo ngaleyo ndlela?
Kwakungekho malunga naloo nto; yinto ethembekileyo. Andikhululekile kwesikhumba sam kodwa ngo-17, kwaye andicinga ukuba ininzi yabaselula bekhona apho. Yinto nje into oya kufunda xa ukhula kwaye ukhula. Ndithembele ukuba ndingafunda ngakumbi ngakumbi kuJamie, inyaniso yokuba unokholo-kungekhona "ukholo" kuba ndikhuselekile kwinto endiyakholelwayo-kodwa nje nokholo ebantwini, ubudlelwane, kunye noluthando .
Ngaba uziva uyenza umgudu wokuzihlukanisa no- Britney noJessica?
Andicingi ukuba ngumzamo ongenamdla. Kungumzamo oqhubekayo wokuhlala uqobo. Ngayo yonke ingcinezelo yoshishino, kwaye baninzi abantu abazama ukukuxelela indlela yokugqoka nokugqoka iinwele zakho kwaye oku kwaye-abantu bahlala bephonsa izimvo zabo kuwe-ngamanye amaxesha unokuba nomzuzwana obuthathaka kwaye uphulaphule uze uphele into ephosakeleyo, ukwenza into engeyiyo.
Ucinga ukuba uhlula ntoni kubo? Yintoni ongayinikela yona ayenayo?
Andiyazi ukuba yinto engayenzayo ayinako. Mhlawumbi nje into yokuba ndineminyaka engama-17 ngummahluko ngenxa yokuba yenza ukungafani nento esiyicula ngayo, ngubani thina njengabantu, apho siphila ebomini bethu, indlela esinxiba ngayo kunye noko sibukeka ngathi. Thina sonke ngabantu abahlukileyo, umgca akukho mntu kweli hlabathi lilinganayo nje ngokuba sonke senzeke ukucula umculo we pop.
Ngaba kukho iqondo lokuncintisana okunempilo phakathi kwakho?
Ndicinga ukuba kumashishini omculo ukhuphiswano lomntu wonke. Injongo ephambili kukuba abantu abaninzi emhlabeni jikelele bakuve umculo wakho ngokusemandleni. Ngoko ke, ke ukhuphiswano kunye nomculi ngamnye okhupha izinto.
Ngaba ubhala umculo wakho?
Ewe, ndibhalele umculo wam.
Ngaba ucinga ukuba ngenye yezinto eziphambili phakathi kwakho nabanye?
Ndicinga ukuba wonke umntu uqala ukubhalela umculo kunye nezinto. Kodwa kwirekhodi elidlulileyo, ndandibhala iingoma ezimbalwa kwaye kuya kuba nangakumbi kwixesha elizayo, kwakhona.
Abantu bayakuvakalisa njani njenge-blonde kwaye kuyahluke kunokuba bayakuvakalisa njani njengebhanqa?
Ewe. Ukunyaniseka - kwaye andiyikucinga ukuba le nto yinto embi - kodwa ndivakalelwa ngabantu abaninzi beqhankqalaza phezu kwam ngoku ncinane nje ngokuba ndiyi-brunette. Ngenxa yezizathu ezithile, ndiziva ndiqinisekile ngakumbi; Ndivakalelwa ngathi mna ndithatha ngaphandle kancinci nje nge-brunette. Ndiziva ndifana nam; Ndiziva ndikhululekile kakhulu. Njenge-blonde, andiyazi, kwakungenjengomntu owaziwayo, "Oo, yindlela endiyazi ngayo, lo ngumfanekiso wintombazana ebonakalayo kumculo we-pop ukuba ube nale blonde iinwele. " Ndandithanda ukuba ngumntu ogqithisileyo kodwa ngexeshana, ndagqiba ekubeni ndibalale iinwele zam.
Ngaba ukuba ngumculi uboleka ukwenza?
Ewe kunye no. Ndicinga ukuba ukuba unenhlanhla ngokwaneleyo ukuba uphumelele kule shishini, iifestile ziya kuvula. Ukuba unenhlanhla ngokwaneleyo ukuba uphumelele. Abanye abantu bayayisebenzisa. Into endiyenayo entliziyweni yam. Ngubani ongeke afune ukwenza i-movie? Into ebambileyo into endiyenayo entliziyweni yam ekubeni ndiqalise ukwenza inkundla yemidlalo xa ndandineminyaka eyi-10. Ukuze ube neli xesha eli-17 ukufunda izikripthi, kunye neentlanganiso kunye nabaqondisi, kunye nabavelisi kunye neenkwenkwezi ezinokwenzeka. , kumangalisa kum. Yinto engaphaya kwamaphupha ami amakhulu.
Yintoni ocinga ukuba yenza ezinye iimvumi zingaphumeleli kwiinguqulelo?
Mhlawumbi into yokuba uthando lokusebenza alukho. Ndiyathetha - kufana nokucula. Ukuba ngokwenene unomdla womculo, uya kuqubuka. Kukho ezinye izinto ezininzi ezibandakanyekayo, kunomsebenzi onzima kakhulu, kukho izinto ongenakuzicingela nje ukucinga nje, "O, ndifuna ukuba ngumculi. Ndifuna ukuba ngumdlali wokudlala." Kukho ezinye izinto ezininzi ezingena kuyo kwaye abantu abayiqondi ngokuthe ngenye indlela kwaye bawa njani.
Kule movie udlala kwaye usebenze. Ngaba udlala indima ethile ekukhetheni umculo wale filimu?
Hayi, kungekhona. Ndacinga ukuba kufanelekile kuba uJamie usebandleni yecawa. Umdlalo wesikolo wawunento ebesele ibhaliwe kwiskripthi, into ayiculayo, kwaye yile mzuzu uMhlabaon uyayigcina ngayo into ekuthiwa uqala ukuyithandana naye. Ndicinga ukuba ndihlobo oluncedo lwale ngoma encinane. Ndingumqhubi omkhulu weqela lamaKhristu elibizwa ngokuba nguSwitchfoot kunye nentombazana eofisi yam yomphathi yaba ngabahlobo kunye nabo, waya esikolweni esiphakeme kunye nabo, waza waletha le ngoma ethile, ethi "Kuphela Ithemba," kwaye sawa thandana nayo. Sasilisebenzisa kulo mdlalo, kwaye sasebenzisa inguqu yabo yefilimu ngokunjalo, kunye nesandi. Sasisebenzisa lonke iqela lomnye umculo, ngokunjalo.
Udlala umntu othembele ngakumbi kwaye unothando olungakumbi kunabantu abaninzi abakwenzayo ubudala bakho. Ingaba loo ndawo ingaqhelekanga ukuya kuwe?
Kwakuyindawo engaqhelekanga ukuya kuyo. Ndineminyaka engama-17 yaye ndihlala kunye nolwalamano lwangempela kwaye kwakunzima ukuthelekisa kuba ndicinga ukuba banamanqanaba ahlukeneyo.
Ndandicinga kakhulu kude neJamie kunye nento awayeyenza ngayo - uhlobo lwentloko yakhe. Andicingi ukuba ndibe namandla. Andicingi ukuba ndibe nesibindi njengoJamie. Ngoko kukho izinto ezininzi eziwela ekuthandweni kunye nokuba yintoni imeko yakhe yonke. Kwakunzima ukufika apho ngamanye amaxesha, kwezinye zezinto ezinzima kakhulu.
Ngaba kunzima ukulinganisa ubuhlobo bokwenene bokuqala kunye nomsebenzi oxakekileyo obonakalayo?
Ewe kunye no. Ndicinga ukuba nayiphi na intombazana iya kwenza ixesha lolwalamano ukuba lufuna ukuba kwenzeke. Uyayazi ndithetha ukuthini? Yonke inxalenye yokuba ngumntwana osemtsha. Ukuba ufuna ukuba kwenzeke, uza kwenza ukuba kwenzeke.
Ingaba kunceda ukuba usekho shishini? Ukuba wayengekho, akanako ukuqonda ishedyuli yakho.
Andizi ukuba ngaba akayi kuqonda ishedyuli yam. Ndiqinisekile ukuba nokuba nekhamsana ekhoyo kumashishini, ngokucacileyo ukuqonda nokuxhasa - yinyaniso. Andiyi kucinga ukuba udibana nabantu abaninzi abangekho kwishishini. Ndandisoloko ndizitshilo ukuba ndiza kutshatyalaliswa nomntu kumashishini, abafana bahlanjululwe, kwaye yiyo kwaye yileyo, kwaye bayabingqina. Ndiyicinga ukuba ndifumene enye yodwa apha echasene ngokupheleleyo. Andiyazi ukuba yenza nayiphi na into eyahlukileyo kum. Akubalulekanga ngokwenene oko akwenzayo ngobomi bakhe, kubaluleke kakhulu ukuba ngubani kunye nendlela endiphatha ngayo.
Kuthiwani ngo-Orlando, eFlorida?
Abantu besoloko bethetha ukuba kukho into enomsola we-orange (ukuhleka). Ndiphela nje intombazana engapheliyo ehlala eOrlando. Ndicinga ukuba wonk 'ubani ukhona kwizinto zeMickey Mouse Club , okanye into yeTranscom, ngokuqinisekileyo yindawo efanayo, kwindawo efanayo. Ndandihlala e-Orlando. Ndakhulela apho, ngaba konke ukuqeqeshwa kwam apho-njengokuya kwiinkampu zeemidlalo zomculo kunye nokwenza indawo yokuzonwabisa yasekuhlaleni idolophu kunye nezinto ezinjalo. Andinaluvo.
Sibona imifanekiso eninzi apho uhlala khona "ukugxeka." Kule nxaxheba, "uhle" kodwa "awunakunyulwa." Ngaba into engaqhelekanga?
Ndiyayithanda. Kunzima kakhulu, kwakhona. Ndifunde iimpendulo ezininzi kwi-intanethi kwaye abantu bafana, "UThixo, Mandy ubukeka bubi kangaka kule movie." Kwaye ndiyathanda, "Ndiyathanda, ndiyayithanda!" Uyazi ukuba kutheni? Ndakuza ukubeka yonke imihla kusasa kunye neye-2 ½ iinyanga ndibe neebhegi ezinkulu phantsi kwam amehlo kwaye ziyakwazi ukugxininisa izibonda ezisezantsi. Bawubumba ubuso bam bubala. Bayeke iinwele zam kwaye banqumla i-bangs kwaye benza konke oku zinto kum, kwaye ndandiyithanda. Kwafuneka ndigqoke iimpahla zokugqoka kunye neeKeds kunye neesokisi ezingahambelaniyo. Ngokuqhelekileyo ucinga ukwenza i-movie kunye nobuhle beHollywood, ukuhamba ngaphandle kwe-trailer kwaye uzive uhle. Ndandiziva ndilungile. Andizange ndive ndibi; Andiyicinga ukuba uJamie wayefanele abe mabi. Akangakhathaleli konke into eninzi intsha.
Kuba ndifanele ndiphumle. Andizange ndibe "nguThixokazi," inkwenkwezi ye-movie, inkwenkwezi. Kwakuyinto nje yokuzonwabisa edlala "i-Plain Jane."
Ufuna ntoni okwangoku? Ngaba uhlakulela umculo wakho okanye ufuna enye ifilimu yomsebenzi?
Ndikhangele iikripthi. Ndifuna ukuqala ukurekhoda kuba umculo ngumphefumlo wam. Ndibhalele kakhulu. Ndifuna ukuqala ukurekhoda nokwenza ezinye iidemos, mhlawumbi ngenyanga ezayo. Ndingathanda ukwenza ifilimu ezizimeleyo. Ngokunyanisekileyo, nantoni nantoni nje ngokuba yincwadi efanelekileyo kunye nento endiziva ngayo ngentshiseko njengoko ndenze ngeA Walk ukuya Khumbula .
Umculo kwi-albhamu yakho yakutshanje ubonisa njani ukuba ungubani ngexesha owalishicilela ngalo?
Ndisaziva ngathi i-albhamu inene kakhulu. Ngokwenene, ndibe nexesha elinjalo lokwenza oko. Kodwa ndikulungele ukusebenza kwezinye izinto nazo. Ndikulungele ukubonisa abantu into endikuyo. Kungenzeka ukuba akuzange kube yinto enempumelelo kakhulu yentengiso ngaphandle apho, kwaye oko kungandichukumisa kakhulu ukuba ndifune ukungena kwaye ndize ndibe nzima ngakumbi kwaye ndibe nomculo endiyithandayo. Ndiyaziqhenya ngokwenene le movie, kwaye ndiyaziqhenya ngaleyo albhamu. Ndandigqibile i-albhamu ngokufanelekileyo ngaphambi kokuba ndiqalise ukutshintshana i-movie, kwaye yaphuma emva kokuba ndiyenze ukutshintshana i-movie, ngoko kuseninzi intliziyo yam.
Ngaba ufuna ukuqhubeka nokwenza iifrimu ezintle ezifana nale okanye ulungele ukuya kwinqanaba elincinane kwaye ube ngumfazi wasendle?
(Ukuhleka) Andiyena mfazi omkhulu wasendle. Ndiyicinga ukuba umdlalo udlala umntu ohlukile kum wena kodwa ndiyathanda le movie ngoba ndicinga ukuba le movie iyimfuneko kakhulu ngoku. Ingumngqungquthela kuzo zonke iifilimu zentsha-kwimbono yam-ekhona ngaphandle ngenxa yokuba inikezela ibali elihle, ukubonakalisa kakuhle ukuba yeyiphi isikolo esiphakamileyo kufana nangona usabona izinto ezinokwenene zengcinezelo yontanga kunye nothando. Njengoko ndathi, Ndifuna ukwenza into nokuba ingaba ngumdlalo, okanye umfanekiso wesenzo, okanye i-epic, into endivakalelwa ngayo-abantu abaya kusebenza nabo, i-script, yonke into.
Iintsholongwane zanamhlanje zinokutshutshisa. Kunokuba nzima ukwenza ukuba bazive benomdla kwaye baninzi ukuvakalelwa kule movie. Ngaba kunzima ukuchukumisa ulutsha ukuba lukhulule, kunye nokukhala?
Lo ngumbuzo omuhle kakhulu. Andazi. Andiyazi ukuba kuya kuba nzima ukufumana abantu belapho. Andiyathemba. Ndiyathemba ukuba abantu banomdla kwifilimu kwaye bafuna into eyahlukileyo. Ndicinga ukuba ngamanye amaxesha ezininzi iifilimi ezivela ngaphandle ziza kuthi zisichukumise ukuba sibe zizilumko, njengokuba zipela zonke izinto. Andiyazi ukuba ihluke ngokucacileyo kule fayili kodwa nje iyinikela-inika yona, nayo-into eyahlukileyo. Akuzange kubekho i-movie kwimiboniso efana nale kweli xesha elide.
Ufanele udibane noNicholas Sparks kwaye ndiyazi ukuba ungumtshi omkhulu. Kwakunjani loo ntlanganiso?
Ndandinomdla kakhulu ngenxa yokuba udidi lukaJamie lusekelwe ngokukhawuleza ngoodadewabo, kunye nohlobo lomntu ayeza kuba nalo kwi-17, kunye nohlobo lomntu owayeneminyaka eyi-17. Ndicinga ukuba usanda kufa, unyaka okanye edlulileyo, ngoko yenze kube nzima. Ndandicacisa ngakumbi. Ndingumdlali omkhulu wakhe kodwa ngexesha elifanayo, ukuba ngumbhali, umbhali, incwadi yakhe iye yaphumelela kakhulu-zonke iincwadi zakhe-ukubona amagama akhe ephila nabantu ababini engabonakaliyo Ndiyazi kakhulu? Isicatshulwa sitshintshiwe kwincwadi, kwaye ndandiva, "Thixo, ndiyathemba ukuba uyonwabile yonke into. Ndiyathemba ukuba ndenza umsebenzi ococekileyo." Ndayeyika kakhulu ekuqaleni kodwa wafika ngosuku lwesibini ekumiseni kwaye wayenomdla wamqinisekisa. Wandihambisa eceleni waza wathi, "Ndiyonwabile ngokwenene. Ndicinga ukuba wenza umsebenzi omkhulu." Ndikwazi ukuphefumula lula kancinci.
Abafaki banokungabi nantoni kwaye bexhala xa beza kuwe. Yintoni oyenzayo ukuzola iingxaki zabo?
Akunzima. Kunzima kakhulu. Ukuba umntu ekhala xa bandibona ngathi, "Kutheni ukhala xa undibona?" Kucacile ukuba uya kufika kum ngemizuzu elishumi, uya kubona ukuba ndiyindoda ephosa ngaphandle. Kunzima kakhulu kuba ungazi ukuba ungathini kumntu. Ngexesha elifanayo yonke into onokuyonwabile kwaye uyombulela kwaye uyonwabise kwaye uzukiswe ukuba bathathe ixesha lokuza kwaye bakubonise.
Bafanele bakusondele njani?
Kanye njengaye nawuphi na umntu. Ndiyayithanda ngenxa yokuba uyabona umahluko phakathi kwamantombazana kunye namantombazana. Amantombazana, ngokuyinxalenye, aya kuvela, "Hayi, ndiyakukunceda ukudibana nawe," kwaye kukunikezela. Abafana bayathanda ukuma ngasemva kunye nabafana babo bathanda, "Ewe, ndikubonayo. Ewe, uyazi." Bahlala bejikeleza. Uyabona bejikeleza kuwe malunga nemizuzu eyi-10 kwintengiso. Abafana banamahloni kwaye besongelwa ukuba bafike kwaye kuthiwa, "Kutheni?"
Kuthiwani ngolu hlobo lwezonyango zonyango? Ngaba yenza ukuba ucinge ngako?
Akuzange kumenze ndive ngelokufa. Ndicinga ukuba wonk 'ubani osebenze kule filimu - kunye noShane noAdam Shankman baya kukuxelela-kungumhlobo owenza ukuba sihlaziywe njengathi, "Wow, ndifuna ukuba ngumntu ongcono. Ndifuna ukuba njengoJamie." Ndiyicinga ukuba yinto eyenceda ngayo. Akunjalo i-movie ephathelele, "Emva koko uyafa," eyona nto yayiyinxalenye enkulu ngayo. Ngaphandle koko andicinga ukuba ndifuna ukubandakanyeka. Ndicinga ukuba, ngezinyembezi, ukuba ufumana imvakalelo kwiimpawu kwi-movie, usaphuma kwi-theater ngokumomotheka ebusweni bakho kuba iphelile kwinqaku elihle.
Ngaba wenza uluhlu olunjengeJamie?
Ndaqala ukwenza uludwe. Andiyi kubhala phantsi, kodwa engqondweni yam. Ndifuna ukuya kwikholeji ukufunda i-journalism, ndifuna ukuthetha isiFrentshi ngokufanelekileyo, ukuhamba. Umama wayengumbhali weendaba kwaye usegazini lam. Ndicinga ukuba lenze ndicinga ngokufuna ukwenza oko ngokubanzi, njengokukhawuleza. Uthi, "Mhlophe Mandy, ndiyazi ukuba uneminyaka eyi-17 kwaye unobomi bakho kodwa mhlawumbi ungaqala ukucwangcisa ngoku malunga nento ofuna ukuyenza."
Zingaphi kwezo zihlolisisile?
Ndihlala ndisebenza kuso. Ndiyathetha ukuba sisisongele ifilimu ezimbalwa ezinyangeni ezidlulileyo. Ndingumdala esikolweni esiphakamileyo ngokukhawuleza xa ndiphuma esikolweni esiphakeme, ndiza kuqala ikholeji ngombhalelwano ngendlela endenza ngayo esikolweni esiphakamileyo ngoku. Ndiya kusebenza kwisiFrentshi. Ndiya kusebenza kuyo; luluhlobo oluhle kangaka. Kwaye ukujikeleza izinto, ubuhle bam, kuya kuxhomekeke ekubeni abantu bafumana njani umculo. Ukukwazi ukuhamba ngeenxa zonke nokwenza kumazwe ahlukeneyo nezinto.
Nguwuphi umyalezo onqwenela ukuba amantombazana asetsheni avele kule movie?
Ndicinga, kunye namadoda, abaninzi abahlobo bam baye bafunda le ncwadi kwaye bahlobo abanomdla-malunga ne-movie bafana, "Mandy, ndifuna ukufumana uJamie. kufuneka ndixelele ukuba uphuma khona. " Ngoko ndifuna abafana bahambe ngaphandle mhlawumbi bacinge ukuba, nabo. Ukholo, ngokuqhelekileyo-alufanele lube nokholo kuThixo, okanye ukholo kunqulo oluphilileyo. Kanye njengoko ndathi, kuluntu, phakathi komnye, ngobudlelwane, nje into ekhethekileyo kuwe. Ndifuna abantu bahambe bekholelwa ukuba kukho ithemba.
I-8 yeMexico ezininzi Iimpumelelo ze-Filmmakers
Iimbono ezilishumi eziMnandi kwiiNtlanga